I-AYTU bioscience UV isibane esinokubakho se-COVID-19 Dis-Infenderant | XperimentalHamid
I-AYTU bioscience UV isibane esinokubakho kwi-COVID-19 Dis-Infectant
Aprili 25, 2020 by Hamid Ali
Iimpawu zeAytu BioScience eziBodwa zeLayisensi yeHlabathi kunye neMisedare-iSinayi yoNyango lweCoronavirus enokubakho ngohlobo lwe "healite" itekhnoloji yokufaka inaliti ye-UV.
Imisedare-iSinayi ubanga ukuphuculwa kwe 'Healight' Medical Computer Platform iTekhnoloji yokufundwa njengoNyango lokuqala kuHlelo lwe-COVID-19.
Unyango lwe-AYTU lokukhanya
Yintoni i-aytu Healite / uphiliso?
Inaliti yesibane se-UV
Ngaba ukuphiliswa emzimbeni kukungenisa ukukhanya kwe-UV emzimbeni?
Ngaba ukukhanya kwe-UV kungangena emzimbeni?
Ngaba ukuphilisa i-aytu kuyafana nonyango lwe-ozone?
Ngaba kukho umntu owenze intsholongwane?
Malunga ne-Aytu BioScience
Iqela libanga ugcino lwetekhnoloji njengonyango olunokubakho lwe-VU yokunyanga i-corona. Nangona kunjalo iya isihla kwaye kwaye kusekutsha kakhulu ukuba ungathethi nantoni na malunga netekhnoloji yokuphilisa.
Ividiyo ye-Aytu Healight
I-Aytu BioScience layisha ividiyo kwi youtube ebiqwalaselwa unyango olukhanyayo njengesibulala-ntsholongwane i-corona.
Ividiyo yokuphilisa ye-AYTU ikwabizwa ngokuba yividiyo ye-aytu ifumene uninzi lweengoma nangona kunjalo u-youtube uyisusile ividiyo ye-aytu ebanga ukuba ividiyo yempilo ayiphikisani nezikhokelo zabahlali.
'Aytu kuthiwa yiTekhnoloji yePlatifomu yoNyango yesixhobo seNzululwazi esifundwa njengoNyango lweNqanaba lokuQala kuCwangciso lwe-COVID-19 olwaphuhliswa yiCedars-Sinai.
Ngokwokweqela elikhokelwa nguMark Pimentel, itekhnoloji yeHealight isebenzisa iindlela zokuphatha inaliti ye-UV ukukhanya iv.
Inaliti ekhanyayo ye-VU ngesixhobo se-endotracheal yenoveli. Iziphumo zaphambi kwekliniki zibonisa ifuthe lobuchwephesha ekupheliseni uluhlu olubanzi lweentsholongwane kunye neebacteria, kubandakanywa i-coronavirus.
Ngokwamabango eqela Iphepha lobuchwephesha lobuchwephesha lisebenzisa iindlela zokuphatha i-ultraviolet (UV) yexesha elizayo.
Itekhnoloji ephuhliswe yi-Cedars-Sinai kunye neqela lakhe bathi bayayenza loo nto. Babanga inaliti yesibane se-UV emzimbeni emzimbeni ngeendlela zobunini.
therapy ozone kubhekisele kwinkqubo yokulawula ozone irhasi emzimbeni wakho ukunyanga isifo okanye inxeba. Nangona kunjalo iteknoloji yokuphilisa malunga nemitha ye-UV.
Asinawo nawuphi na umthombo osemthethweni okanye oqinisekileyo wokubanga inaliti yesibulala-ntsholongwane okwangoku.
I-Aytu BioScience, Inc. yinkampani yezamayeza ekhethekileyo yokuthengisa amayeza egxile ekuthengiseni iimveliso zenoveli ezijongana neemfuno zesigulana. Inkampani ngoku ithengisa ipotifoliyo yemveliso egunyazisiweyo ejongene nononophelo olukhulu kunye neemakethi zabantwana.
Umxholo uqokelelwe kwi-intanethi nakwi-web sec sec. Ungafunda ngakumbi kwindawo usebenzisa kwesi sixhobo.